Dad ku dhow Nus Malyuun ruux oo Corona Virus ugu dhintay dalka Hindiya.
Saturday July 03, 2021 - 19:31:13 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Caabuqa covid19 ayaa markale gummaad ba'an ka geystay wadanka Hindiya ee dhaca qaaradda Aasiya.
Wasaaradda caafimaadka dowladda Hindiya ayaa ku dhawaaqday in dadka caabuqan ugu dhintay dalkeeda ay ka sare mareen 400 oo kun taas oo ka dhigan in dalkan uu yahay dalka sedaxaad ee caalami ahaan ladhiban Covid19.
Saraakiisha caafimaadka waxay sheegeen in shalay oo kaliya uu Corona Virus uu soo ritay dad ku dhow nus malyuun ruux arrinkaas oo hindiya kaalinta koowaad ka gelinaya bukaannada ugu badan caalamka ee ka dhashay safmareenka Corona.
Guddiyada caafimaadka waxay sheegeen in 441 kun iyo 111 bukaan ladiinwaan geliyay maalintii jimcaha halka ay dhinteen 738 ruux, marka laga hadalayo dhanka dhimashada waa maalintii ugu hoosaysay muddo 86 maalmood ah.
Sare ukacan xowlliga ah ee Coronka uu ka sameynayo hindiya oo ah dalka labaad ee ugu dadka badan qaaradda aasiya ayaa walwal ku beertay dowladaha reergalbeedka kadib markii lahelay dhowr kiis oo kasoo farcamay Viruskan halista badan ee hindiya ka jira.
dalka Mareykanka ayaa wali hoggaanka uhaya dalka ugu dhimashada badan caalamka ee Covid19 halka Baraaziil uu kujiro kaalinta 2aad hindiyana waxay ku jirtaa kaalinta sedaxaad.
Khubarada caafimaadka ayaa saadaalinaya in Hindiya ay kaalinta labaad soo cariirsan doonto haddii dhimashadu ay xowlli ah kusii socoto si lamid ah bishii June ee lasoo dhaafay oo maalin walba ay dhimanayeen ugu yaraan 2900 ruux marmarka qaarna ay dhimashadu gaaraysay 6000 oo qof.